- Ny martsa manerantany
Fikarohana sy fikarohana ny fomba fijerin'ny fisehoan-javatra
Asehoy ny fikarohana ny fisainana
Jereo ny fomba	 ListaMesSemanadíasari-tanyFoto
Fihaonambe manaraka »
Avy amin'i Rosso any Maoritania miampita ny Reniranon'i Senegal
mena mena, Maoritania + Google Map
Avy any Rosso any Maoritania, mandalo ny reniranon'i Senegal.
Tetikasa «Fanombohana ny fiafarana fitaovam-piadiana niokleary», Pinto
25 Oktobra @ 19: 00-21: 00 CEST
Trilte Social Center, Lalan'ny Empedrada, 16
pint, Madrid 28320 España + Google Map
Tetikasa «Fanombohana ny fiafarana fitaovam-piadiana niokleary», Pinto, Trilte Social Center.
Fanolorana ny boky «Tantara ho an'ny fandriampahalemana. Ny tantaram-piainana manaitaitra mba hahitana tontolo tsara kokoa ”
25 Oktobra @ 19: 30-21: 00 CEST
Tranomboky Arriero, Torrejón de Ardoz, Calle los Curas, 31
Torrejón de Ardoz, España + Google Map
Ilay boky: "Tantara ho an'ny fandriam-pahalemana. Ny tantaram-pampaherezana mba hahitana tontolo tsaratsara kokoa" dia natolotra tao amin'ny Librerie Arriero. Ny olona mahatakatra fa ny fandriam-pahalemana dia tsy aorina mafy sy aingana handrosoana
Tonga any San Luis, Senegaly
26 Oktobra @ 09: 00 GMT
San Luis Senegal + Google Map
Tonga any San Luis, Senegaly ny ekipa base.
Ny fanadiovana Playa del Reducto, Arrecife
26 Oktobra @ 09: 00-14: 00 CET
Playa del Reducto - Arrecife - Lanzarote, Playa del Reducto - Arrecife - Lanzarote
haran-dranomasina, Las Palmas España + Google Map
Ny fanadiovana ny morontsiraka sy ny ambany amin'ny Playa del Reducto, Arrecife.
Voaroaka ho an'ny fandriampahalemana, Santiago, Chile
27 Oktobra @ 10: 00-14: 00 CET
Ossandon Square-Santiago de Chile, Ossandon Square
Santiago de Chile, Shily + Google Map
Mandeha bisikileta ho an'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra, voarakitra ao anatin'ny tontolon'ny diabe manerantany.
Sakafo firaisankina amin'ny «Hortas de Feans» iombonana
27 Oktobra @ 13: 00-18: 00 CET
Centre Civic Center of the Feans akaiky, Camiño de Campos, 4
Feans, A Coruña 15190 España + Google Map
Solon'ny firaisankina mba hisian'ny "TheNNXX World March for Peace and Nonviolence", nokarakarain'ny "Hortas de Feans". Iray amin'ireo fikambanana maro izay manatanteraka hetsika hahatonga ny 2 World martsa hita ho an'ny olom-pirenena A Coruña. PROGRAMA: 2: 13 fandraisana ny vahiny ary mitsidika ny toeram-piompiana
A tango ho an'ny fandriampahalemana, Vicenza
27 Oktobra @ 16: 00-19: 00 CET
Palazzo Chiericati, Vicenza, Piazza Giacomo Matteotti, 37 / 39
Vicenza, Italia + Google Map
Serena natao handihizana ary hanome aina ny Flash Mob izay horonantsary sy havoaka ao amin'ny tranokalan'ny diabe maneran-tany www.theworldmarch.org ho fandraisana anjara amin'ny italianina ho an'ny hetsika ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandevenana. Rehefa tapitra ny sarimihetsika dia afaka mitohy mandihiza miaraka amin'ny fifaliana sy ny firaisana mahafinaritra isika.
Tonga any Thies, Senegaly
28 Oktobra @ 09: 00-09: 30 GMT
Thies, Thies Senegal + Google Map
Tonga any Thies avy any Louga, Senegal ny ekipa base.
Tonga tany Ndiadiane, Senegaly
30 Oktobra @ 10: 00-10: 30 GMT
Ndiadiane, Senegal, Ndiadiane
Ndiadiane, Senegal + Google Map
Tonga ao Ndiadiane ny ekipa World March Team.